यी व्यक्ति बिन्दास भएका कारण सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेका छन् , आखिर यिनले के गरे त्यस्तो ? (हेर्नुस भिडियो) – List Khabar
Home / समाचार / यी व्यक्ति बिन्दास भएका कारण सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेका छन् , आखिर यिनले के गरे त्यस्तो ? (हेर्नुस भिडियो)
यी व्यक्ति बिन्दास भएका कारण सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेका छन् , आखिर यिनले के गरे त्यस्तो ? (हेर्नुस भिडियो)
admin November 8, 2021 समाचार Leaveacomment 85 Views
के तपाई लाई लु टपा ट गर्न आउने चोर डा का संग ड र लाग्छ ? पक्कै पनि आम मानिसहरुलाई ड र लाग्नु स्वोभाबिक कुरा हो तर यहाँ एक व्यक्त्तिलाई ब न्दुक त्य र्साएर आफ्नो घाटीमा लगाएको चेन तान्दा पनि आनन्द तरिकाले खाना खाईरहेका छन् ।
यी ब्यक्ती यति बिन्दास भए कि केहि कुरामा डराएन्न । बिन्दास भएका कारण एक व्यक्ति सोसल मिडियामा निकै भाइरल भइरहेका छन् । लू ट पाटबीच पनि शान्तिपूर्वक खाना खाइरहेका यी व्यक्तिको भिडियो ट्रेन्डमा छ ।
ती लु टेरा त्यसपछि यी व्यक्ति भएठाउँ पुग्छन् र उनको सिक्रि तान्छन् तर यी व्यक्ति न त डराउँछन् न नै कुनै प्रकारको विरोध गर्छन् । यी व्यक्ति कुनै प्रतिक्रिया बिना नै आफ्नो खानामा मस्त देखिन्छन् । भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यी व्यक्तिलाई आफ्नो खानाबाहेक अन्य कुनै कुराको वास्ता छैन ।
त्यसपछि लुटेराले यी व्यक्तिको फोन पनि माग्छन् । यसपटक पनि उनी न ड राई आरामले आफ्नो फोन यी व्यक्तिलाई दिन्छन् र आफ्नो खानामा नै केन्द्रीत हुन्छन् ।
यी व्यक्तिको व्यवहार त्यहाँ भएका अन्य मानिसहरुभन्दा भिन्न थियो । जहाँ एकातिर थुप्रै मानिसहरु यो चोरलाई देखेर भाग्ने र लुक्ने कोसिस गरिरहेका थिए भने केही मानिसहरु यस्ता पनि थिए जो आफ्नो महँगा सामान लुकाउने कोसिस गरिरहेका थिए । यी चोर यी व्यक्तिको मोबाइलबाहेक यो रेष्टुरेन्टबाट अन्य केही महँगा सामान लिएर भागेका थिए ।
यो घटनापछि मानिसहरु निकै डराइरहेका देखिन्थे भने लुटपाटपछि पनि यी व्यक्ति आफ्नो चिकन विङ्ग्स खान मस्त थिए । यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि लुटेरासँग एउटा पि स्टोल छ । उनले हावामा पिस्तोल हल्लाउँछन् र रेष्टुरेन्टमा भएका मानिसहरुसँग उनीहरुका महँगा सामान माग्छन् । यतिबेला एक व्यक्ति आरामले चिकेन विङ्ग्स खाइरहेको देख्न सकिन्छ ।
Previous भोलीदेखि तीनदिनसम्म सार्वजनिक विदा
Next भोलि कार्तिक २३ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् राशिफल!